वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : आफैंलाई ढाँट्न सकिँदैन
खासमा मलाई कालो हाल्न मन नलागेको आफू बूढो भएर होईन। म आफूलाई अझै तन्नेरीनै सम्झिन्छु:) कपाल सेतो हुँदैमा म बूढो भएको लाग्दैन मलाई। कपाल कालै रहीरहनुले ब्यक्तित्व खुल्छ भन्ने कुरा कसैले ठान्छ भने त्यो पनि निरर्थक हो। कपाल छपक्कै सेतै भएका कति वृद्धहरु कालो कपाल हुनेभन्दा झन् ब्यक्तित्ववान देखिन्छन्। ब्यक्तित्व भन्ने कुरो कसैको चिन्तन, उसको दैनिकीको शैली र उसको सार्वजनिक जीवनले निर्माण गर्ने कुरो हो, कपालको रंगले केहि फरक पार्दैन।
मलाई सेतो कपाल कालो पार्ने काम अरुलाई ढाँट्नु जस्तै लाग्छ। मलाई चिन्नेले त 'यसले कालो हालेछ--' भन्ने बुझीहाल्छन्, त्यसैले त्यहि ढाँट्ने भनेको पनि मलाई नचिन्नेलाई हो। मलाई नचिन्नेलाई मेरो कपाल सेतो होस् वा कालो, कुनै मतलब होला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले यो 'ढँटाई' पनि खासै 'कामको' हुने देखिन्न।
आफ्नो सेतो कपाललाई कालो बनाएर अरुलाई झुक्याएको भ्रम पारेर बाँचेपनि, आफैंलाई भने झुक्याउन सकिँदैन। जति बाक्लो कालो हालेपनि वा कपाल रंगाएर रातो, निलो जस्तो पारेपनि मेरो कपाल सेतै फुलेको यथार्थले मलाई छोडने होईन।
Posted by Basanta at 7:57 PM
वेदनाथ पुलामी April 11, 2011 at 9:23 PM
बसन्त दाइ मान्छेहरु यस कुरालाइ त्यतिकै सहजरुपमा लिन सक्दैन नि नि !
मेरो बारेमा भनौ भने .... त्यस्तो वेला अलिक भएकै पो छैन क्यारे ! पछी पनौला नि !
Dilip Acharya April 15, 2011 at 6:10 PM
अहिले सम्म झुक्याउनु पर्ने स्थिति नआइसकेको हुनाले त्यसै भन्न त सक्दिन... तर म पनि कालो--त्यसपछि ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट अनि केवल ह्वाइट जे जे हुन्छ त्यसैमा रमाउने विचारमा छु ।
फेरि कपाल सेतो हुन थालेपछि जत्ती ढाक-छोप गरेपनि त्यो देखिन्छ नै ।
“Evenasingle hair casts its shadow”
Aswini Koirala January 31, 2013 at 3:09 PM
article man paryo